भारु सटहीबारे छलफल पनि गर्न मान्दैन भारत « Clickmandu
भारु सटहीबारे छलफल पनि गर्न मान्दैन भारत
प्रकाशित मिति : १८ पुष २०७३, सोमबार १६:५६
काठमाडौंं । नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारतले प्रतिवन्धित ५०० र १००० दरका भारु नोट साट्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
गत कात्तिक २३ गते साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो दरका भारु नोट नचल्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै अर्थात् कात्तिक २९ गते अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीलाई टेलिफोन गरी नेपालमा भएका ५०० र १००० दरका भारु नोट साट्न आग्रह गरे । सो टेलिफोनवार्तामा जेट्लीले महरालाई आफुले सकरात्मक पहल गरिदिने आश्वासन दिए ।
‘भारतीय पक्षले नेपालमा रहेका ठूला दरका भारु नोट सटहीको विषयलाई सिरियसली नलिँदा यहाँ रहेका नोट साटिन्छन् कि साटिँदैनन् भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । यसबारेमा कुरा गर्नका लागि भारतीय पक्षले समयदिन पनि आनाकानी गर्दै आएको छ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले पनि पटक-पटक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर उर्जित पटेलसँग टेलिफोन र इमेलमा नेपालमा रहेका भारु साटिदिन आग्रह गरे । पटेलले राष्ट्र बैंकको इमेललाई भारतको वित्त मन्त्रालयमा फरवार्ड गरिदिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्- भारुबारे कुरा गर्न जान लागेको टोलीलाई भारतले भन्यो-किन आउनु पर्‍यो ?
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि नेपालमा भएका भारु साटिदिन आग्रह गर्दै २÷३ पटक टेलिफोन गरिसके । मोदीले पनि सकरात्मक पहल गर्ने भन्दै प्रचण्डलाई आश्वस्त पारे ।
तर, भारु नोट साट्ने विषयमा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले पुस १ गते डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यी टोली गठन गर्यो । उक्त टोलीले भारु सटहीका विषयमा कुरा गर्न भारत जाने भन्दै नेपालस्थित भारतीय दूताबास र भारतमा रहेको नेपाली दूताबासलाई खबर गर्यो ।
तर, दुबैले ‘हामी सक्दो पहल गरिरहेका छौैं तपाईँहरु आउनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए ।
उनीहरुले भारतको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग नेपालको टोलीलाई भेट गर्ने समयसम्म मिलाई दिएनन् ।
त्यसपछि अर्थात् डेढहप्ता अघि नेपालस्थित भारतीय दूताबासले गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई छलफलका लागि बोलायो । छलफलमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले आफूहरु भारतीय उच्च अधिकारीरुसँग नेपालमा भएका भारु सटहीबारे प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहेको र त्यसका लागि समय मिलाइदिन आग्रह गरे।
छलफलमा उठेका विषयलाई दूताबासले भारतीय वित्त मन्त्रालयलाई पठायो । वित्त मन्त्रालयले आफ्ना अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा भारु सटहीबारे कुरा गर्न टोली नै नेपाल पठाउने भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक उनै अतिरिक्त टोलीको पर्खाइमा बसे । तर अहिलेसम्म सो टोली नेपाल आएको छैन । कहिले आउँछ भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नभएको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् ।
‘भारतीय पक्षले नेपालमा रहेका ठूला दरका भारु नोट सटहीको विषयलाई सिरियसली नलिँदा यहाँ रहेका नोट साटिन्छन् कि साटिँदैनन् भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ,’ पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसबारेमा कुरा गर्नका लागि भारतीय पक्षले समयदिन पनि आनाकानी गर्दै आएको छ ।’
पण्डितका अनुसार नेपालको औपचारिक च्यानलमा ५०० र १००० दरका ३ करोड ३६ लाख छन् । र, अझैपनि ती नोट साटिने ढोका भने बन्द भइनसकेको उनको भनाई छ ।
‘अझैपनि नेपालमा भएका ५००० र १००० दरका भारु साटिने ढोका बन्द भइसकेको छैन,’ उनले भने ।